Showing ५१-६० of ४५१ items.
किरात समुदायको साकेला उभौली समापन
पथरी । किरात समुदायको महान् पर्व साकेला उभौली मोरङको कानेपोखरीमा सम्पन्न भएको छ । बैशाख १७ गते देखि सुरु भएको साकेला उभौली मोरङमा सोमबार समापन भएको हो । ‘खेतीपाती सप्रियोस,रोगव्याधी नलागोस,प्राकृतिक विपत्ति नपरोस’ भन्ने कामना सहित पितृ तथा भूमिको पूजाआजा गरी समापन भएको हो । कानेपोखरीमा मोरङ र झापाका १८ वटा साकेला सिली नृत्यहरुको सहभागीता जनाएका थिए । दाजुभाइ,दिदीबहिनी,बुबाआमा,इष्टमित्रको सहभागितामा गोलो घेरामा ढोल र झ्याम्टा बजाउँदै साकेला नाचेका थिए । साकेला थानमा भूमिको पूजाआजा गरेपछि साकेला गीतको भाकामा हात र खुट्टाले भाका टिप्दै साकेला सिली नाच्दै रमाएका थिए । कार्यक्रममा प्रवेश द्रार व्य
पथरीलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन पहल सुरू
शनिश्चरे । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार राईले नगर अन्तर्गत पथरी उत्तरको विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिर एवम् साकेला थानस्थल क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकासका लागि पहल गरिने वताएका छन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले किरात राई यायोक्खा नगर समितिले उभौलीका अवसरमा शनिवार आयोजना गरेको साकेला सिली प्रतियोगिताको समापनका अवसरमा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । यले दुङ ५०७८ को सन्दर्भ समेतको कार्यक्रममा उनले भने ‘यहाँ सालेकाथान सहित विभिन्न जातीय धार्मिक एवम् सांस्कृतिक थलोका रुपमा यही वरीपरी मठ मन्दिरहरु रहेकाले यसलाई धार्मिक पर्यटकीयस्थल वनाउन सकिन्छ ।’ भुल्के
प्रकाशित मितिः बैशाख ३०, २०७५
लण्डन/लण्डन नजिकै किराँत राईहरुको आफ्नै भूमी ग्याम्बलस लेन, रिप्ले अवस्थित माङखिम तथा साकेला स्थल (किराँत राई घर) मा उँभौली यलेदोङ ५०७८ (वि.स) शाकेला पर्व भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । बेलायतमा हरेक बर्ष साकेला पर्व तथा उँभौली शिली प्रतियोगीता प्रतिस्पर्धाका साथ धुमधाम सँग मनाउने चलन बढ्दै आएको छ । किराँती धामी (नाछोङ) ले टाउकोमा सेतो(फेटा लगाई सुम्निमा-पारुहाङ्गको तस्विर, ढोल र झ्याम्टा सहित सेउलीको थानमा उभौली भूमीपुजा गरी थान वरिपरी नाचेर विधी अनुरुप कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । किराँत राई यायोक्खा बेलायतको अध्यक्ष पदमबहादुर राईको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाली
प्रकाशित मितिः बैशाख २३, २०७५
सतिसाले बनेको गुम्बा उद्घाटन
पानवारी । मोरङको केराबारी गाउँपालिका वडा नं. ५ सतिसालेमा निर्मित साङ्गे नाङ्साल छ्योलिङ गुम्बाको उद्घाटन गरिएको छ । गु म्बामा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ताइवानबाट आएका ताओ एशोसिएसन अफ नेपालका प्रमुख धर्मगुरु चाओ सिङ सिभोङ र प्रदेश सांसद उपेन्द्र घिमिरेले संयुक्त रुपमा गुम्बाको उद्घाटन गरेका हुन् । सतिसाले घेदुङ चोकमा रहेको गुम्बा केराबारी गाउँपालिकाको नमुना गुम्बाको रुपमा रहेको गुम्बाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर जिम्बाले बताए । करिब २ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको गुम्बा निर्माण भएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा गुम्बा भित्र रहेको मूर्तिको अनावरण समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा बौद्ध शिक्षा प्रबच
प्रकाशित मितिः बैशाख २१, २०७५
राधेश्याम मन्दिरमा महायज्ञ हुने
पानवारी । धरान–१ स्थित राधेश्याम मन्दिरमा सात दिने भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुने भएको छ । राधेश्याम महिला जागरण समूह धरानको आयोजनामा २०७५ साल जेष्ठ २ गतेदेखि जेष्ठ ९ गतेसम्म महायज्ञ हुने भएको विहीबार मन्दिर परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । महायज्ञको भागवत कथावाचिका पण्डित राधिका दाशीको मुखाराविन्दुबाट हुने आयोजक समितीका कार्यक्रम संयोजक कोपिला भट्टराईले बताइन् । कथावाचिका पण्डित महिला भएकाले भट्टराईले महायज्ञ सम्पन्न गर्न महिलाहरुले गरेको प्रयासलाई सहयोग गरिदिनु हुन धरानवासीलाई आग्रह समेत गरेकी छन् । संयोजक भट्टराईका अनुसार महायज्ञको उद्घाटनको दिन जेष्ठ २ गते अनन्त श्री विभ
लिम्बूहरूले गरे 'किरात' त्यागेर 'युमा' धर्म मान्ने घोषणा
धरान । किरात धर्म लेख्ने गरेका लिम्बूहरूले अब ‘युमा धर्म’ मान्ने घोषणा गरेसँगै लिम्बू समुदायमा तरङ्ग पैदा भएको छ । धरानमा मङ्गलबार सम्पन्न तीनदिने ‘युमा मुन्धुम, धर्म र दर्शन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीले युमा धर्म मान्ने घोषण गरेपछि तरङ्ग पैदा भएको हो । युमा साम्यो महासभाद्वारा धरानको हरियाली पार्कमा आयोजित गोष्ठीमा याक्थुम्बा (लिम्बू÷सुब्बा) जातिले अनुसरण गरेको परम्परागत धर्म, संस्कार र संस्कृति ‘युमा धर्म’ मान्ने घोषणा गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्राज्ञ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति तिलविक्रम नेम्बाङ ‘वैरागी काइँला’ ले याक्थुम्बाहरूको परम्परागत धर्म, संस्कार, संस्कृति
भानुचौकमा साकेला सिलि प्रदर्शन
पानवारी । सोमबारबाट सुरु भएको किराँतीहरुको महान् चाड उभौली मंगलबार पनि साकेला सिली नाचर मनाइएको छ । किरात राई यायोक्खा धरान उपमहानगर समितिको आयोजनामा धरानको भानुचोकमा भएको साकेला सिलीमा धरानका किरातीहरुको उल्लेख्य रुपमा सहभागीता रहेको थियो । प्रारम्भिक कार्यसमिति वडा न.९ र १० को संयोजनमा गरिएको साकेला सिलिमा इटहरीको एउटा समुह र धरानका १२ वटा समुह गरी १३ समुहले धरानको भानुचोकमा साकेला सिलि प्रदर्शन गरेका थिए । साकेला सिलिमा झ्याम्टा, ढोल बजाएर एक आपसमा गोलो आकार बनाएर साकेला सिलि नृत्य प्रदर्शन भएको थियो । भानुचोकमा भएको औपचारीक कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खाका केन्द्रिय अध्यक्ष तिलक राई, भाष
प्रकाशित मितिः बैशाख १९, २०७५
आम्बारीमा काली मन्दिर बन्दै
मधुमल्ला । उर्लाबारी नगरपालिका—८ स्थित आम्बारीमा काली मन्दिर निर्माण गरिने भएको छ । उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले मन्दिरको शिल्यान्यास गरेपछि निर्माणको काम तिब्र रुपमा भईरहेको छ । मन्दिर निर्माणको लागि आम्बारीमा आयोजित पुराणमा स्थानीय समाजसेवी चौकीलाल धिमालले २ लाख २१ हजार, जगन्नाथ गुरागाई ७५ हजार सहयोग गरेका थिए । सहयोगीदाता धिमाललाई मन्दिर शिल्यान्यासका दिन सम्मान गरिएको थियो । धिमालहरु जस्तै मनका धनीहरुबाट पुराणमा ५ लाख १६ हजार सहयोग जुटेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्ली नेपालले जानकारी दिएका छन् । मन्दिरका लागि उर्लाबारी वडा नम्बर ८ बाट ३ लाख रुपैंया विनियोजन भईसकेको
प्रकाशित मितिः बैशाख १८, २०७५
साकेलामा माझिलाई घर उपहार
पानवारी । किरातीहरुको महान् चाड साकेला उभौलीको अवसरमा धरान–११ का ज्ञानबहादुर माझीलाई घर उपहार दिइएको छ । साकेला उभौलीको अवसरमा पत्रिकार बेचेर गुजारा गर्दै आएका माझीलाई धरान उपमानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाले सोमबार घरको चाबि हस्तान्तरण गर्दै घर उपहार दिएका हुन् । सुब्बाले चाबी हस्तान्तरण गर्दै गर्दा धरान वडा नम्बर १७ नं.का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले ढोल बताएका थिए भने १७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष प्रविण राई र किरात राई यायोक्खा सुनसरीका सदस्य एवं सञ्चारकर्मी उपेन्द्र चाम्लिङले झ्याम्टा बजाएका थिए । माझीको घर बनाउन गएको तिहारमा पत्रकारहरुले देउसी खेलेर संकलन गरेको रकम बीउ पुजीको रुपमा राखेर अन्य
नेपाल बन्धुको कुल पूजमा चार सम्मानित
भद्रपुर । नेपाल बन्धुहरुले आयोजना गरेको कुलपुजामा विविध कार्यक्रमसहित चार जनालाई सम्मान गरिएको छ । नेपाल कुलबशं पूजा प्रतिष्ठान चन्द्रगढी झापाले सोमबार भद्रपुर १० मा देवाली पूजा तथा सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थागत अध्यक्ष,जेष्ठ नागरिक र सन्ततीका छोरा छोरीलाई सम्मान गरिएको हो । समितिले जेष्ठ नागरिकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भद्रपूर १० का डिल्लीरमण नेपाल र अर्जुनधारा नगरपालिकाका दिव्यराज नेपाललाई सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरि २०७४ को एसइइमा ३ दशमलव ६० प्रतीशत अङ्क ल्याई वन्धु उत्कृष्ट भएका भद्रपुरका छात्र सुलभ र ३ दशमलव ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउने भद्रपुरकै कामना नेपाललाई ११सय नगद स